Aqoonkaab Wiil Afirca udhashey oo 27sanno xabsi ku jiray haddana kamid noqday dadka dunida ugu caansan. | Aqoonkaab
Wiil Afirca udhashey oo 27sanno xabsi ku jiray haddana kamid noqday dadka dunida ugu caansan.
Jun 24, 2016Arrimaha bulshada
Nelson Mandela wuxuu kamid ahaa dadka loogu jeclyahy looguna ixtiraamka badanyahay dunida,sababo tirobeela awgood wuxuu sii ahaaday geesi weyn .wuxuu ahaa qof aynu kabaranay casharo badan.wuxuu helay khibrado badan 90 sanno uu noolaa. silic iyo ciqaab badan kadib wuxuu noqday madaxwayne dalkiisu jeclyahy. kadib markii uu hawl gab noqday, wuxuu sii waday inuu ukala socdaalo dunida,dadka caawiyo iyo inuu ukaco wacyigalinta la xidhiidha xaaladaha aduunka.
Nelson wuxuu dhashey 1918 wuxuu ku dhashey south africa kasoo ukala qeybsanaa madow iyo cadaan xaga jinsiyadaha. mar uu ka hadlaayey noloshiisii caruurnimo wuxuu yiri”waxaan lahaa xili caruurnimo oo cajiiba waxaan niyad uhayey oradka iyo feedhtanka” Nelson wuxuu bartay inbadan nidaamkii midab kala socoo markii uu dhigtay inuu noqdo garyaqaan . tasoo ku hogaamisay olalihii xuquusiman iyo asaasidii ururka African
National Congress (ANC),kasoo markii danbe uu ka noqday hogaamiye.
dadwladii koonfur africa ee waqtigaasi waxay samaysay intii awoodeeda ahayd mandela ka xanibto inuu fidiyo fariintiisii sinaanta madowga,cadaanka iyo in la mideeyo jinsiyadihii kala duwanaa ee koonfur africa. waxay dhigtay jeelka 27sano. intaa kadib wuxuu aduunka ka noqday caan iyadoo loo sababeeyo inuu noqday sumad u halganta xuriyada koonfur africa, xidigaha muusiga kulul,jilaayasha,iyo siyaasiyintuba waxay u olaleyeen inuu xoriyadiisii dib u helo lana dhameeyo midabkala sooca.waxaa jeelka laga sii daayey 1990 warkasoo aduunku ku farxay.
Nelson mandela wuxuu dadaal badan ugalay inuu heshiisiyo jinsiyado kala duwan ficilkasuu ku hantay qalbiyada malaayin qof.sidokale wuxuu ku guulaystay Abaalmarinta nabada aduunka, sanadkii 1993, iyo inkadan 250 abaalmarino. sannad kadib, wuxuu noqday madaxwaynihii ugu horeeyey ee madow ah ee wadankiisu yeesho wuxuuna xafiiska hayey ilaa 1999. wuxuu sii waday si aan nasasho lahayn inuu ka qeyb qaato xalinta dhibaatoyinka dunida ka taagan ilaa da’adu hoos udhigtay . wuxuu dhintay 5 December,2013 dada 95.
neslon wuxu lahaa hadalo xikmadleh oo taarikhdu qortay aynu ku soo gabagabayno hadalkan” waxbarashadu waa hubka awood badan kasoo aynu ku badali karno dunida”
Previous PostGabay qaab dhismeedka lafaha iyo sida ay iskugu xidhan yihiin (Skeletal system) Next PostWay I diiday facebook, intaa kadibna waxay iga bixisay 4 bilyan oo doolar